Soo dejisan STANDARD Codecs for Windows 9.5.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: STANDARD Codecs for Windows
HEERKA Codecs for Windows – set ah codecs iyo qalabka si loo maqli karo ee files audio iyo video. software The qabata skaanka faahfaahsan of drive nidaamka iyo badalay ee codecs versions of rakibay Kiniisado kale ay u gaar ah si ay u bixiyaan waafaqid weyn. HEERKA Codecs for Windows waa inay awoodaan inay ciyaaraan inta badan oo ka mid ah qaabab warbaahinta in ciyaaryahan audio iyo video kala duwan. Sidoo kale HEERKA Codecs for Windows kuu ogolaanayaa inaad tirtirto qaybaha gaarka ah ee xirmo oo aan baahida loo qabo in meesha laga saaro oo dhan codecs ah.
Maqnaanshiyaha ciyaartoyda dheeraad ah
AutoCorrect of codecs jira
Streaming Video in daalacashada ugu
Ka kaxaynta oo ka mid ah qaybaha gaarka ah ee baakada
Soo dejisan STANDARD Codecs for Windows
Faallo ku saabsan STANDARD Codecs for Windows
STANDARD Codecs for Windows Xirfadaha la xiriira